निर्वाचनमा एक लाख कर्मचारी लगाइने » खबरहरुको एउटै केन्द्र
निर्वाचनमा एक लाख कर्मचारी लगाइने
आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब एक लाख कर्मचारी खटिने भएका छन् । आयोगले यही जेठ ३१ गते बुधबार हुने ४६१ स्थानीय तहका लागि छ हजार ७१८ वटा मतदानस्थलमा रहने ११ हजार ९३१ मतदान केन्द्रमा ती कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सबै प्रकारको तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै यस निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीबाहेक ९५ हजार ९३१ कर्मचारी खटिने बताउनुभयो ।
चारवटा प्रदेशका ४३ जिल्लामा आयोगले जेठ ६ गते नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जेठ १५ गतेबाट ४१८ वटा स्थानीय तहमा
मतदान अधिकृतको कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले समग्रमा जिल्लाभरिको निर्वाचन प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुका साथै जिल्ला सदरमुकाम रहेको स्थानीय तहको मतदान अधिकृतको कार्यसमेत कार्य गर्नुहुनेछ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले त्यस जिल्लाको हरेक मतदान केन्द्रमा पठाउनुपर्ने निर्वाचन सामग्रीको रुजु गर्ने, अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री, मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा तालिम गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछन् ।
प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्र, निर्वाचन बन्दोबस्तीका सबै सामान सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइसकिएको जानकारी दिनुभयो । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १२ उपमहानगरपालिका, १५६ नगरपालिका र २९३ गाउँपालिका गरी ४६१ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
सरकारले २२ वटा स्थानीय निकाय थप गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले स्थगित भएको छ । त्यसले गर्दा ४६१ वटा स्थानीय तहमा मात्रै जेठ ३१ मा निर्वाचन हुन लागेको हो ।
PREVIOUS POST Previous post: प्रधानमन्त्रीद्धारा द्रुतमार्ग शिलान्यास भयो
NEXT POST Next post: पैसा कमाउन खाडी किन जानु ?
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, जेष्ठ १४, २०७४ ०६:५१